Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android 7.1.1. (Modely D802) | Androidsis
Raha andro vitsy lasa izay dia nampianatra anao aho manavao ny Samsung Galaxy S3 amin'ny android 7.1.1, izao dia anjaran'ny modely iraisam-pirenena LG G2 tsy mirehitra na modely D802, izay ho an'ny maro no finday avo lenta Android tsara indrindra noforonin'i LG hatrizay. Ka anio dia hampianariko ianao manavao ny LG G2 D802 amin'ny Android 7.1.1 amin'ny fomba tsy ofisialy amin'ny alàlan'ny LinageOS 14.1, na inona no mety ho fitohizan'ny Cyanogenmod 14.1.
Iza no nilaza fa efa nodimandry ny Roms masaka? Inona koa, iza no sahy mieritreritra fa ny LG G2 dia terminal hatramin'ny taloha, rehefa asehoko anao amin'ilay horonan-tsary mifamatotra izay nanombohanay ity lahatsoratra ity, hitantsika hatraiza ny LG G2 mamindra ny kinova Android farany sy farany indrindra amin'ny LinageOS?.
Ao amin'ny horonantsary nametrahako anao teo ambonin'ireto tsipika ireto, ankoatra ny fampisehoana aminao ny faran'ny Android 7.1.1 mihetsika ny maodeliko LG G2 na maodely D802, asehoko anao ihany koa ny fomba fandefasana ireo rakitra ilaina izay izahay handeha hitarika any manavao ny LG G2 amin'ny Android 7.1.1 .
Etsy ambany no anazavako ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hahafahanao manavao ny LG G2 anao amin'ny Android 7.1.1, manomboka amin'ny fomba famongorana azy io ary mametraka ny TWRP na fanarenana novaina, hatramin'ny fisintomana sy fampidirana ireo rakitra ilaina rehetra mba hiasan'ny LG G2 anay ny andro voalohany namoahanay azy, miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe izay hanavaozantsika azy amin'ny Android farany sy farany.
1 Fepetra ilaina ilaina amin'ny fanavaozana ny LG G2 D802 mankany Android 7.1.1
2 Ny fisie dia mila manavao ny LG G2 D802 mankany Android 7.1.1
3 Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 D802 amin'ny Android 7.1.1. Fomba fandrefesana tsikelikely.
3.1 Fomba fikolokoloana
Fepetra ilaina ilaina amin'ny fanavaozana ny LG G2 D802 mankany Android 7.1.1
Manana ny terminal, LG G2 modely D802, Miorim-paka ary nohavaozina ny TWRP Recovery amin'ny kinova farany misy
Manana a fampirimana EFS backup raha toa ka.
Manana a nandroid backup ny rafitra iray manontolo raha mihemotra isika handao ny zava-drehetra tahaka ny talohan'ny fizotran'ny Rom.
Manana backup amin'ny alàlan'ny rindranasa rehetra sy data satria mandritra ny fizotran'ny tselatra dia hamafana azy rehetra isika, na dia izany aza Manoro hevitra manokana ny fametrahana madio aho hatrany am-piandohana.
Manana ny Nasaina ny debugging USB avy amin'ny fipetrahan'ny mpamorona.
Ny fisie dia mila manavao ny LG G2 D802 mankany Android 7.1.1
TWRP amin'ny kinova 3.0.2.1 misintona avy eto.
Ampidino ny Rom tsipika-14.1-20170101-UNOFFICIAL-d802.zip avy amin'ity rohy ity
Sintomy ny Gapps Android 7.1, nano na micro Eto ny kinova rehetra tadidio ny misafidy ARM + Android 7.1.
Raha vantany vao voafafa ireo rakitra telo ilaina, ny Mandika tsy misy decompressing amin'ny fahatsiarovana anatiny an'ny LG G2 izahay na amin'ny Pendrive noho ny fametrahana azy amin'ny alàlan'ny OTG ary manaraka ireto dingana manaraka amin'ny taratasy ireto izahay:
Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 D802 amin'ny Android 7.1.1. Fomba fandrefesana tsikelikely.
Manoro hevitra aho fa ankoatry ny famakiana ireo dingana tokony harahina manavao ny LG G2 D802 amin'ny Android 7.1.1Manoro hevitra anao ny hijery ilay horonantsary izay navelako anao teo am-piandohan'ity fampianarana azo ampiharina ity, ary ao no asehoko anao ny zava-drehetra tsikelikely sy amin'ny fotoana tena izy.
Miditra amin'ny maody fanarenana izahay ary manavao ny TWRP Recovery amin'ny endriny farany izahay tsindrio fotsiny ny Safidy fametrahana ary safidio ny zip nalefa teo aloha.
Andao handeha amin'ny safidy Reboot ary mifidy isika Fikoranana amin'ny famerenana indray.
Mandeha amin'ny safidy isika mamafa o Manadio ary tsindrio eo fanadiovana mandroso y Misafidy ny safidy rehetra izahay afa-tsy ny làlana izay ananantsika ny rakitra handefasana ny Rom sy ny Gapps.
Mandeha amin'ny safidy isika hametraka o hametraka y Isika aloha dia misafidy ny zip ny Rom ary avy eo mifidy ny zip an'ny Gapps na rindranasa Google tompon-tany, ao anatin'io lamina io hatrany, dia misafidy ny zip Rom LinageOS aloha izahay ary avy eo ny Zapp Gapps.
Izahay dia mamindra ny bara mba hanatanterahana ny hetsika nangatahina izany dia mihoatra ny flashing sy ny fametrahana ireo rakitra roa.
Rehefa tapitra ny dingana dia safidintsika ny safidy an'ny Hamafa Cache sy Dalvik o Manadio Cache sy Dalvik, mamindra ny bara fitetezana indray izahay ary rehefa vita dia mifidy ny safidy Reboot System.
Amin'izay dia efa eo am-pelatananao ianao ankafizo ny maodely LG G2 D802 misy anao amin'ny Android farany sy farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android 7.1.1. (Model D802)
Misaotra Francisco. Ateriko izy io mandra-piandry ny andrana. Mirary ny soa indrindra
Misaotra tamin'ny tutorial. Fantatrao ve raha mety hiorim-paka ny rootroot?
Marce dia hoy izy:
Salama, voalohany indrindra MANKASITRAKA anao namela anay hahazo zavatra ho an'ny lg g2 d802 nilaozana ... fangatahana, manana Android 5.0.1 tsara ny sela, te-hametraka 7.1.1 aho nefa manana olana, tsy mahazo aho ' manana ny folder efs ... miaraka amin'ny root explorer, root browser, ary tsy hita izany…. Faka aho. Miandry valiny aho, avy any Arzantina! Misaotra betsaka !!
Taloha tamin'ny S3 rehefa nanao zavatra maro tamin'ny finday aho dia nataoko fa tsy nanao backup an'ny folder efs…. ary ny zavatra rehetra niasa tamin'ny folo !!
Azoko atao ve ny manao an'io amin'ny lg tsy manohana an'io folder io?
Salama, manao ahoana ianao? Te hilaza aminao aho fa efa afaka nametraka azy io ary mahavariana amin'ny lg g2 d802…. Te-hanao fangatahana aho, aiza no ahafahako maka ilay rindrambaiko lavitra be izay azoko avy amin'ny orinasa, izay ilay miasa foana mahagaga ???. Miandry valiny aho, misaotra betsaka !!
Salama tsara! manaraka ny dingana rehetra tsy natomboky ny rafitra. Rehefa avy nandao ny logo LG dia nisy varavarankely mainty niseho ary tsy nanao na inona na inona. Ny vahaolana dia ny fampidinana ny CAF BootStack avy https://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/boot-g2-hybrid-bootstacks-t3183219 Manaova hamafana, apetraho ny bootstack, ary apetraho avy eo ny ROM sy ny GApps araka ny voalazanao tao amin'ny torolàlana. Tamin'izany no niasa ho ahy tsy nisy olana. Mirary ny soa indrindra!
Jose Manuel Martinez Salvador dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko, fa tsy afaka miditra amin'ny fanarenana toa ny nataonao aho
Valiny tamin'i Jose Manuel Martinez Salvador
Salama, TE HANANA NY FAMPIANARANA FOTOTRA FOTOTRA FOTSINY AVY AVY AMIN'NY FITONDRANA ARY IZAY TSARA INDRINDRA, AIZA NO ATAFAKO AZY?, MISOKATRA ??? ??? MIANDROSO NY VALIM-PANAHY, FITIAVANA !!
KRMLO dia hoy izy:
Miala tsiny aho fa tsy namaly anao teo aloha, fa io anefa no hitako
andrana amin'ny ZAZA REMOTE.APK
Valiny amin'i KRMLO
Sandy cordovi dia hoy izy:
Salama, mila fanampiana aho. Ny olana dia nanandrana nametraka azy tamin'ny lg g2 d802 aho, vao vita ny restart dia niseho ny logo lg ary nesorina dia navela teo daholo ny zava-drehetra. Tsy manomboka ny finday, toy ny hoe tsy afaka nanainga ny rafitra fiasa aho, azafady miandry valiny faran'izay haingana, ho feno fankasitrahana tanteraka aho
Mamaly an'i Sandy cordovi
Bern dia hoy izy:
Toy izany koa no nanjo ahy toa an'i Sandy Cordovi.
Hadinoko ny dingana farany tamin'ny "Wipe Cache & Dalvik na Cache Clean and Dalvik" ary ny telefaona dia tsy manomboka na mampiseho mariky ny fiainana.
Valiny tamin'i Bern
Juan Luis dia hoy izy:
Salama Francisco, fanontaniana iray (raha mbola mandinika an'ity lahatsoratra ity indraindray ianao).
Nanao ny Root an'ny LG2 aho taorian'ny fanoloran-kevitra tena tsara nataonao (ny fametrahana ny fanavaozana farany natolotry ny Lineage tamin'ny volana Aogositra), tena tsara tokoa izany ary miarahaba anao aho.
Ny fanontaniako dia: manolotra fanavaozana vaovao ahy ve (nataoko ny fampidinana), ahoana no fomba hirosoako amin'ilay fanavaozana? Mitovy amin'ny tamin'ny nametrahako voalohany?.
Valiny tamin'i Juan Luis
Jose Atay dia hoy izy:
Amin'ny firy ny fotoana manomboka amin'ny fametrahana voalohany?
Valiny tamin'i Jose Atay
Nataoko ny dingana rehetra, fa toy ny maro tamin'ireo izay nandefa azy dia tsy manomboka izany. Ahoana no ahafahako mamerina mifehy ny findainao?
Manomboka mitsapa ny Instant Apps i Google